नेपालको नक्सा अङ्कित केक काट्दा प्रधानमन्त्रीमाथि उठ्यो देशभक्तिको प्रश्न !
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो आफ्नो ६९ औँ जन्मदिन मनाउनुभएको छ। उहाँले आफ्नो जन्मथलो तेह्रथुमको आठराईमा पुगेर आफ्नो जन्मदिन मनाउनुएको हो। जन्मदिनमा उहाँले १५ किलोको केक काट्नुभयो। उक्त ...
सभामुखको नाम टुङ्ग्याउन ओली प्रचण्ड छलफलमा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच सभामुख चयनका विषयमा बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ। चौथो पटक तोकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठकको समय नजिकिदै गर्दा नेकपाका अध्यक्...
यस्तो छ सी जिनपिङको भ्रमणतालिका, कति बजे कोसँग भेटवार्ता ?
असोज २५, २०७६, शनिबार
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा आज नेपाल आउँदैछन् । उनी आज अपरान्ह ५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दैछन् । दुई दिनको नेपाल बसाइँमा उनको व्यस्त भ्रमण तालिका स...